Azia Atsinanana · Oktobra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Japana19 Oktobra 2007
Shina : Youtube voasakana
Toa voasakana tsy ho hitan'ireo mpampiasa aterineto avy any Shina tokoa i Youtube raha ny filazan'ireo vavolombelona maro sady samihafa fihaviana. Ny mpiblaogy Ken Wong [Shinoa Zh] dia manamarika fa ity fanakanana ity dia nipoitra fotoana fohy (iray andro monja) taorian'ny nivoahan'ny Youtube amin'ny fiteny nentim-paharazana Shinoa. Ny blaogy Transpacifica...
Myanmar (Birmania)16 Oktobra 2007
Myanmar : Ezaka fanalam-baraka ireo mpanokatena
Myanmar (Birmania)13 Oktobra 2007
Ny blaogy New Mandala [Anglisy] dia manome rohy amin'ny lahantsoratra izay navoaky ny gazety Birmana fehezin'ny fitondrana jadona miaramila izay miezaka manala-baraka ireto mpanokatena. Tsahivina fa ireo mpanokatena ireo no tena loha-laharana tamin'ny fikomiana izay nitranga tany an-toerana. « Misy vehivavy matory ao anaty trano fonen'ireto mpanokatena sady nahatrarana koa...